တက်ကြွလှုပ်ရှားနိုင်ငံသား | British Council
တက်ကြွလှုပ်ရှားနိုင်ငံသား အစီအစဉ်သည် လူမှုဝန်းကျင်ခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်း အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လူမှုဝန်းကျင်တွင် ၎င်းတို့ အလေးထားသော အကြောင်းအရာပြသနာကိစ္စရပ်များကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပံ့ပိုးပေးခြင်းအားဖြင့် နားလည်မှုနှင့် ယုံကြည်မှုများကို တည်ဆောက်ပါသည်။
တက်ကြွလှုပ်ရှားနိုင်ငံသားအစီအစဉ်သည် အကျိုးအမြတ်မယူသော အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး လက်ခံနိုင်မှု၊ မတူညီသော ယဉ်ကျေးမှုများကြား ဒိုင်ယာလော့်များ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အသွင်ပြောင်းလဲခြင်းများ နှင့် လှုမှုအခြေပြုဖွံ့ဖြိုးရေးများကို တက်ကြွလှုပ်ရှားနိုင်ငံသား သင်ယူမှုခရီးစဉ်မှတဆင့်မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
တက်ကြွလှုပ်ရှားနိုင်ငံသား လူမှုခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းအစီအစဉ်မှတဆင့် ကျွနိုပ်တို့သည် ထောင်ပေါင်းများစွာသောသူများအား ၎င်းတို့ အလေးထားသည့် အကြောင်းအရာကိစ္စရပ်များအပေါ် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန် အားပေးခဲ့ပါသည်။ဤလုပ်ဆောင်ချက်များသည် ၎င်းတို့အား ၂၁ ရာစု ၏ အချို့သောအကြီးမားဆုံး လူမှုစိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းရန် အဆင်သင့်ဖြစ်စေပါသည်။
တက်ကြွလှုပ်ရှားနိုင်ငံသားအစီအစဉ်အား ဗြိတိသျှကောင်စီနှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့များမှ အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်းနှင့် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဖွံ့ဖြိုးမှုများ ရရှိရန်လုပ်ဆောင်ရာတွင် လူမှုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၏ ပါဝင်မှုများကို မြှင့်တင်ပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
တက်ကြွလှုပ်ရှားနိုင်ငံသား အစီအစဉ်သည် လွန်ခဲ့သော ဆယ်နှစ်တာ ကာလအတွင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် သိသာထင်ရှားသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာကို အမှန်တကယ် ဖြစ်ထွန်းစေခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ဤအစီအစဉ်အတွက် တက်ကြွစွာ မြုပ်နှံထားသူတစ်ဦးချင်းဆီ၏ ဆယ်နှစ်တာ
ရဲစွမ်းသတ္တိများ၊ ခွန်အားများနှင့်ပြည့်နေသည့် အံ့သြဖွယ်ရာ ဆယ်နှစ်တာအတွေ့အကြုံများ၊
လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှ အပြုသဘောဆောင်သော ပြောင်းလဲမှုများအား ဖော်ဆောင်ရာတွင် ဦးစီးဆောင်ရွက်ပြုသော ဆယ်နှစ်တာ စသည့် သက်ရောက်မှုများဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါသည်။
တက်ကြွလှုပ်ရှားနိုင်ငံသားအစီအစဉ်သည် မိတ်ဖက်ပေါင်း ၄၀ ကျော်နှင့် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး Master Facilitator ၂၅၆ ယောက်အား မွေးထုတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထိုပံ့ပိုးကူညီသူများမှတဆင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားနိုင်ငံသားပေါင်း ၁၀၀၀၀ ‌ကျော်အား ဆင့်ပွားသင်တန်းပို့ချပေးခဲ့ပြီး ရပ်ရွာလူထု ၇၀၀၀၀ ကျော်ဖြင့် လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်များကို ချိတ်ဆက်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တက်ကြွလှုပ်ရှားနိုင်ငံသားများသည် ၎င်းတို့၏သင်ယူမှုများကို မျှ‌‌ဝေခြင်း၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ တက်ကြွလှုပ်ရှားနိုင်ငံသားများနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် မတူညီသည့်ယဉ်ကျေးမှု၊ ပထဝီအနေအထားနှင့်နိုင်ငံရေးနယ်နိမိတ်များအကြား သက်တူရွယ်တူ စိတ်ဝင်စားမှုတူသည့်သူ အချင်းချင်း ဆက်ဆံရေးကို လူမှုရေးကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် ပိုမိုအားကောင်းစေပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ “တကမ္ဘာလုံးနှင့် ချိတ်ဆက်၊ ဒေသတွင်း ပူး‌ပေါင်းဆောင်ရွက်”ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ တခြားနိုင်ငံများနှင့်ချိတ်ဆက်၍သော်လည်းကောင်း လေ့ာလာရေးခရီးစဉ်များမှတဆင့်လည်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။
တက်ကြွလှုပ်ရှားနိုင်ငံသားအစီအစဉ်သည် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြင့်သာ ပူး‌ပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အ‌ရေးကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်နေသည့် အစိုးရသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍများ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူမှုစီးပွားအဖွဲ့များအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း အပြုသဘောဆောင်သော ပြောင်းလဲမှုများကို လုပ်ဆောင်လိုသည့်သူများဖြင့်သော်လည်းကောင်း ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ဤအစီအစဉ်သည် ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ် နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း ၁၄ ခုဆီသို့ရောက်ရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။
တက်ကြွလှုပ်ရှားနိုင်ငံသားအစီအစဉ်သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဒေသတွင်းမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် ထောင်စုနှစ် စင်တာများ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တက္ကသိုလ်များမှတဆင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ်အထိတွင် တက္ကသိုလ် ၁၂ ခုနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း နှင့် ကွန်ယက်ပေါင်း မြောက်များစွာဖြင့် မိတ်ဖက်ပြုလုပ်ကာ လူငယ်ကဖွံ့ဖြိုး‌ရေးနှင့် ရပ်ရွာလူထုစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှာ
ရန်ကုန် အရှေ့ပိုင်း တက္ကသိုလ်
' Active Citizens has taught me to see the world through the lens of possibility. Collectively, we can even move the world. '
Chan Hein (Active Citizen, Myanmar)
တက်ကြွလှုပ်ရှားနိုင်ငံသားအစီအစဉ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် လူထုဦးဆောင်သည့် လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ပေါင်း ၈၁ ခုအား အောက်ပါ ခေါင်းစဉ်များအပါဝင် ကမျိုးစုံမှ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါသည်။
အားလုံးပါဝင်၍ မျှတသော ဒီမိုက‌ရေစီအသိုင်းအ၀န်း‌ပေါ်ပေါက်လာစေရေး
အားလုံးပါဝင်သော ပညာရေးနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲများ
ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲ၍ အားလုံးပါဝင်သော စီးပွားရေးက
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်သည် လုပ်အားပေးသက်သက်သာမဟုတ်ဘဲ တက်ကြွလှုပ်ရှားနိုင်ငံသားများအား ၎င်းတို့ ဖြေရှင်းလိုသော အကြောင်းအရာနှင့် ပြသနာများကိုသင်ယူစေပြီး ၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည် အပြုသဘောဆောင်သော ပြောင်းလဲမှုများတွင်လူထုများပါဝင်ခွင့်ရရန် အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးနိုင်သည်ကို ပို၍နားလည်စေပါသည်။
' Being an Active Citizens is Loving your community and yourself. '
Kaung Su Thar (Active Citizen, Myanmar)
မည်သူမဆို တက်ကြွလှုပ်ရှားနိုင်ငံသားဖြစ်နိုင်ပါသည်။ တက်ကြွလှုပ်ရှားနိုင်ငံသားအစီအစဉ်နှင့်ပက်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဒေါ်ဂျာထွယ်အောင်အား ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံတကာရှိ လုပ်ငန်းများကို Active Citizens ၏ ဝက်ဗ်ဆိုဒ်တွင် လေ့လာပါ။